Ny fahitana Apple TV 4K nipoaka dia mampiseho fanamorana fanamboarana. Ny Siri Remote no mahazo ny ratsy indrindra amin'izany | Avy amin'ny mac aho
Ny fahitana Apple TV 4K nipoaka dia mampiseho fanamorana fanamboarana. Ny Siri Remote no mahazo ny ratsy indrindra amin'izany
Averina indray ary iFixit mampiseho antsika fomba hafa nipoaka, amin'ity tranga ity dia ny Apple TV 4K sy ny remote control Siri Remote. Toa ny Apple TV raha mora ny manolo ny ampahany ao anatiny fa ny Siri Remote dia tsy manam-pahamehana sy bebe kokoa amin'ny tranga bateria.
iFixit dia manasongadina ny fanaparitahana mora ny ‌Apple TV‌ 4K natolotr'i Apple ny volana aprily lasa teo ary ny singa tsirairay avy aminy dia apetraka mora foana ary Mora ny manala ireo singa anatiny rehetra ao anaty visy.
Araka ny hitanao ao amin'ny horonantsary navoakan'izy ireo tao amin'ny Youtube avy amin'ny iFixit, ny fikatsoana dia toa tena tsotra amin'ity tranga ity ho an'ny boaty ambony Apple:
Amin'ity horonantsary ity dia miresaka momba ny fahatapahan'ny Siri Remote ihany koa izy ireo, amin'ity tranga ity dia toa sarotra kokoa ny manova ny singa rehetra amin'ity fanaraha-maso lavitra ity noho ny toa anao ary mila manala ampahany betsaka ianao hahazoana, ohatra, ny bateria. izay no mety hiafara amin'ny fanimbana haingana. Misy fiantraikany amin'ny bateria ny fandehan'ny fotoana amin'ity tranga ity ny Siri Remote dia manana azy eo ambany izay manery hamongorana ny fanaraha-maso saika hidirana ao aminy.
Araka ny voalazan'ny iFixit Mety hanimba ny Siri Remote ianao raha mila manala na manova bateria noho izany antony izany no tsy anoroan'izy ireo hevitra hanatanterahana izany. Etsy ankilany, ny Apple TV 4K raha mora azo kokoa amin'ny resaka fanamboarana azo atao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Ny fahitana Apple TV 4K nipoaka dia mampiseho fanamorana fanamboarana. Ny Siri Remote no mahazo ny ratsy indrindra amin'izany